Tababare Cabdi Joon “Waan Bogaadinayaa Shaqada Ay Qabteen Ciyaartooyda Kooxdayda” – Goobjoog News
kooxda ciidanka xooga dalka ee Horseed ay ku dhameystay kaalinta 2-aad ee kala sareynta horyaalka Somalia Premier League fasal ciayareedka 2018-2019 hadana dad badan ayaa qabay aragti ah in xidigaha Horseed ay u qalmeen hanashada horyaalka marka loo eego ciyaarihii ay soo bandhigeen.
Layliyaha kooxda Horseed Cabdiwali Maxamed Maxamuud (Cabdi Joon) ayaa Goobjoog u sheegay in uu aad ugu faraxsanahay is badalka muuqda ay xidigihiisa muujiyeen welina uu soconayo hamigooda hanashada tartamada gudaha dalka ee kusoo wajahan iyo kuwa dibada ay kooxda ka qeybgalayso xagaagan.
Kooxda Horseed 18-ciyaareed ay dheeleen horyaalka Somalia Premier League 2018-2019 waxaa laga adkaaday 2 kulan waxaana ka badiyay kooxaha kala ah Heegan iyo Elman kulamadaas waxa ay dhaceyn bilihii Maarso iyo April 2019 tababre Cabdi Joon ayaa Goobjoog u sheegay in aysan guuldarooyinkaas u qulmin.
Tababare Cabdi Joon ayaa hogaaminta naadiga Horseed kusoo laabtay April 2018 tan iyo kusoo laabashadiisa maxaa iska badalay hanaanka maamulka kooxda ee la tacaamulka ciyaartooyda.
Taageerayasha cawa iyo maalin ee Horseed ayaa iyagana ciyaartooyda u muujiyay dhiiri gelin wanaagsan horyaalka Somalia Premier League 2018 2019 macalin Cabdi Joon ayaa ka mahad celinaya arinkaa.
Kooxda Dekedda ayaa sanadkii saddexaad oo xariir ku guulaystay horyaalka Somalia Premier League Macalin Joon waxaa uu u hambalyo u diray kooxdiisii hore Dekedda oo soo maamulay 2015-2016 maadaama markii 3-aad oo xariir ah loo caleema saaray hanashada horyaalka Somalia Premier 2018-2019.
Halkan Ka Daawo Warbixin Ku Saabsan Horomarka Kooxda Horseed
Search Levitra Progesterone Purchasing Discount Cash On Delivery [url=http://uscagsa.com]viagra vs cialis[/url] Order Plavix No Prescription Up Levitra Viagra Vendita Milano
п»їbuy cheap viagra blog http://alexa24ph.com – viagra pills cialis sale antidoping
Ytmdil abpklc Best price for generic cialis otc cialis
Jdtayh omzbbf Canadian generic cialis canadian pharmacy cialis 20mg
Kqlruf mdvfoa Pharmacy viagra cialis india